Efa ho 42 taona no niasa teto amintsika ny BAD na ny Banky Afrika momba ny fampandrosoana. Nandritra izany, sivy lavitr’isa dolara Amerikanina no efa novatsian’ny FAD na ny teti-bola ho an’ny fampandrosoana an’i Afrika ho an’I Madagasikara. Miavaka ny fiaraha-miasa amin’izao fitondrana izao, satria dia mifanaraka tsara amin’ireo velirano nifanaovan’ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA tamin’ny vahoaka malagasy ireo teboka laharam-pahamehana ho an’i BAD. Isan’izany ny fahazoan’ny malagasy misitraka herinaratra, izay sady amin’ny vidiny mirary.
Ankotra izay, tanjon’ny fitondrana ankehitriny ny ho lasa sompitra eto amin’ny ranomasimbe Indiana sy hizaka tena ara-tsakafo. Amin’ny taona ho avy dia ho tratra ny tanjona amin’ny fizakan-tena ara-bary, ary miara mientana amin’ny fanjakana malagasy ny BAD amin’ny famatsiam-bola amina tetikasa fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra.
Noraisina teto amintsika nanomboka tamin’ny alatsinainy teo, ary tapitra ny talata teo ny FAD 15 na ny fivoriana hanapahana ny teti-bola entina ho vatsiana ho an’i Afrika. Porofo ny firalahiana eo amin’ny BAD sy Madagasikara izay, ary manamarika ihany koa fa manana ainga vao ny firenena hirosoana amin’ny fampandrosoana.
Tonga nitsidika sy nitafa tamin’ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA tetsy amin’ny lapam-panjakan’i Iavoloha ny filohan’ny Banky Afrikana momba ny fandrosoana Akinwumi Adesina. Sambany tamin’ny tantaran’I Madagasikara no nanao fanamby lehibe ho an’ny fisandratana i Madagasikara ary hitondra ny fanohanany ny BAD amin’ny fahatrarana ireo tanjona ireo.